शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई कलेजो प्रत्यारोपणमा पाँचौँ सफलता – Nepali Health
२०७६ माघ ११ गते १६:५० मा प्रकाशित
काठमाडौँ ११ माघ । भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई कलेजो प्रत्यारोपणमा पाँचौँ सफलता मिलेको छ । केन्द्रले गत २८ पुसमा पाँचौँ पटक प्रत्यारोपण गरेको हो । सर्लाहीका ६२ बर्षीय योगेन्द्र महतोलाई उनका छोरा ३५ वर्षीय पंकज महतोले कलेजो दान दिएका हुन ।
प्रत्यारोपणका लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित म्याक्स हेल्थकेयरको कलेजो विभाग प्रमुख तथा कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. सुभास गुप्ता नेतृत्वको पाँच जनाको टोली आएको थियो । यता नेपाली टोलीको नेतृत्व केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले गरेका थिए ।
नेपाली टोलीमा डा श्रेष्ठ सहित डा आरती राई, डा. निरज जोशी डा सञ्जय यादव, डा जयन्त कुमार शाह, डा. निभा श्रेष्ठ, डा अनिषा तिवारी, डा सपना वर्मा, डा रोशन घिमिरे, डा कर्ण राजवंशी, डा. रश्मित श्रेष्ठ, डा अच्युत खनाल, कोपिला दहाल, बबिता लबजु, अनिता कार्की, विनिता उप्रेती लगायतको टोली संलग्न थियो ।
सो प्रत्यारोपण कार्यका लागि नेपाली तथा भारतीय गरी ३० जना चिकित्सक तथा नर्सहरुको टोली सहभागी भएको केन्द्रले जनाएको छ ।केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले अब देखि महिनामा कम्तिमा एउटा कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने योजना रहेको बताए ।
नेपाललाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यका साथ २०६९ वैशाख ११ गते स्थापना भएको यस केन्द्रले पहिलो कलेजो प्रत्यारोपण भने २२ मंसिर २०७३ मा गरेको थियो । त्यसबेला कोरियाबाट आएका प्रत्यारोपण विज्ञले सघाएका थिए । त्यसको केही समय पछि मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त मिर्गौला तथा कलेजो समेत प्रत्यारोपण भएको जनाएको छ ।
सातामा अधिकतम ६ देखि ८ वटासम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा १७९ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको थियो । हाल सम्म ६८० जनाको मृगौला प्रत्यारोपण ९९% सफलताका साथ सम्पन्न गरेको निर्देशक डा श्रेष्ठले बताए ।
नेपालमा बर्षेनी करीब १,००० जनाभन्दा बढीको कलेजो फेल हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा करीब २० लाख रुपैयाँमा कलेजो प्रत्यारोपण हुने गर्दछ भने भारत तथा अन्य बिकसित देशहरुमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्दा करीब १ करोड देखि डेढ करोडसम्म खर्च लाग्ने अनुमान छ ।